राजु परियारको जन्मदिन बिशेष खतरा दोहरी (हेर्नुहोस् भिडियो) – Complete Nepali News Portal
राजु परियारको जन्मदिन बिशेष खतरा दोहरी (हेर्नुहोस् भिडियो)
ScotNepal June 30, 2021
लोक दोहोरि क्षेत्रमा अहोरात्र खटिरहने अनि लोक क्षेत्रमै आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाउन सफल गायक राजु परियारको आज आसार १५ गते सोमबार शुभ जन्मदिन परेको छ। हरेक नेपालीको मन मस्तिस्कमा बसेका गायक राजु आज पनि उत्तिकै जोस र जागरका साथ सांगीतिक क्षेत्रमा अघि बडिरहेका छन्। प्रत्यक्ष दोहोरि गाउदा कसैले जित्न नसक्ने उनलाई लाखौ दर्शकको माया अनि साथ सदैब छ।उनलाई जन्मदिनको शुभकामना दिने को भिडको ओइरो छ। सांगीतिक क्षेत्रमा अझै अगाडि बडेको हेर्न पाउ। गायक राजु परियारलाई जन्मदिनको लाखौ लाख ‘शुभकामना’ !
एक समय नेपाली लोकदोहोरीमा राजु परियारको ठूलै साम्राज्य थियो । तर, नाटकीय रुपमा उनको करिअर चम्किदाचम्किदै एकाएक निभ्यो ।लोकपि्रयताको शिखरबाट उनलाई कसैले फेदीमा हुत्याएको होइन, आफैं चिप्लेका हुन् । लामो अन्तरालपछि फेरि आफूलाई ब्यूझाँउने प्रयत्न गर्दैछन् । फेरि उकालो उक्लिन खोज्दैछन् । के राजू फेरि त्यो शिखर चुम्न सक्लान् त ? राजुलाई आफ्नो जिन्दगी पहिले जुन लयमा थियो आज पनि त्यही लयमा हिँडेकोजस्तो लाग्छ । त्यसो भए यो बीचमा उनी कहाँ बरालिएका थिए ? उनी दावी गर्छन्, ‘बीचमा रेस्ट लिएको हो । उत्कृष्ट गीतको खोजीमा देश-विदेशमा दौडने क्रममा यसो हुन गएको हो ।’
त्यसैले त झलकमान गन्धर्व, बिमाकुमारी दुरा, हरिदेवी कोइरालाका सदावहार गीतलाई ‘मिस’ गर्दारैछन् राजु ।राजुले अहिलेसम्म कति गीत रेकर्ड गराए होला ? उनले गाएका थुप्रै गीत आफैले बिर्सिसकेका छन् । कतिपयले राजुलाई मात्रै गाउन लगाएर आˆनो नाम अगाडि राख्दै एल्बम निकालेका छन् । कतिले त उनको स्वर राखेर नामै उल्लेख गरेका छैनन् ।
थप सामाग्री भिडियोमा हेर्नुहोस् :